यी सपनाले दिन्छ १० दिनपछि हुने घटनाको बारेमा संकेत, कतै तपाईले देख्नुभयो की ? – List Khabar
Home / जीवनशैली / यी सपनाले दिन्छ १० दिनपछि हुने घटनाको बारेमा संकेत, कतै तपाईले देख्नुभयो की ?
admin August 11, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 292 Views
काठमाडौँ । बैज्ञानिकहरु भन्छन् सपना हाम्रो दवाइका इच्छाका झलक हुन् । शास्त्रले भने यो कुरा मान्दैन । शास्त्रका अनुसरा सपनाको सम्बन्ध सिधा आत्मासँग हुन्छ । सपनाले देश काल र परिस्थिति एवं भविष्यको संकेत गर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
Previous कहिल्यै नसुत्नुहोस् यी ४ पोजीसनमा, हुनसक्छ पेटका लागि खतरा
Next उपत्यकामा राति ८ बजेपछि सवारीसाधन चलाउन नपाइने